🥇 ▷ Viber loogu talagalay iPhone hadda waxay leedahay taageero loogu talagalay Wadahadalka Dadweynaha ✅
Viber loogu talagalay iPhone hadda waxay leedahay taageero loogu talagalay Wadahadalka Dadweynaha
Viber hadda waxaa ku jira taageerada qaar ka mid ah qalabka ‘iOS 8 iyo waxyaabo kaloo badan
Iyada oo nooca cusub ee Codsiga fariimaha ee loogu talagalay iPhone iyo Mac, Viber, wuxuu ku yimid muuqaal cusub oo xiisa badan, waa Wadahadalka Dadweynaha ee adeegsadayaashu ay ku sii jiri karaan danahooda. Intaa waxaa sii dheer waxay sidoo kale qaadataa astaamaha la jaan qaada macruufka 8 iyo waxyaabo kaloo badan. Baro dhammaan wararka ku saabsan codsigan oo kala soo bixi si bilaash ah xagga hoose.
Waa maxay Viber aaladda iOS
Viber loogu talagalay iPhone Waxay kuu ogolaaneysaa inaad kula xiriirto dadka adduunka oo dhan wada sheekeysi, wicitaan iyo dirista fariimo leh sawirro iyo fiidiyooyin toos ah Wi-Fi ama 3G bilaash. Intaa waxaa sii dheer, waad ku raaxeysan kartaa muujinta Viber Out taas oo noo oggolaaneysa inaan u yeerno taleefannada gacanta ee aan lahayn Viber ku rakiban iyo taleefannada guryaha oo qiimo hooseeya. Viber waa codsi dhinacyo badan leh waxaana laga heli karaa dhammaan noocyada taleefannada casriga ah iyo sidoo kale kumbuyuutarrada.
In Viber, lambarka taleefankaaga ayaa ah aqoonsigaaga. Codsigu wuxuu la shaqeeyaa liistada taleefankaaga lagaala xiriiro isla markaana wuxuu si toos ah u ogaadaa qof walba oo adeegsada Viber.
Iyadoo Viber waxaad ku raaxeysan kartaa astaamaha soo socda:
U dir fariimaha qoraalka asxaabtaada.
Samee wicitaano lacag la’aan ah oo leh dhawaaq qeexan.
La wadaag sawirrada, fiidyowyada, fariimaha codadka, goobaha, dhejisyada iyo emmoonsons.
Kooxo ka kooban ilaa 100 kaqeybgale.
Ka soo dhejiso alaabada calaamadinta dukaanka Tag oo u dir fariimo xiiso badan.
Waad ku mahadsan tahay inaad ogeysiisyada riixdid, weligaa ma waayi doontid wicitaan kasta ama farriimo xitaa marka Viber uusan firfircoonayn.
Iyaga oo la jaan qaadaya barnaamijka Viber ee Windows, Mac, Linux iyo Windows 8
Maxaa ku cusub nooca 5.1.1 ee Viber ee aaladda iOS
Noocan cusub ee Viber-ka waxaa ka mid ah wararka soo socda:
Wadahadalka dadweynaha: Raac wadahadalada kooxda oo hel sheekooyinka ugu dambeeyay ee ku saabsan danahaaga. Waxaad kaloo tilmaami kartaa waxa aad ka kooban tahay waxyaabaha aad jeceshahay, sida farriimaha, sawirrada, fiidyowyada, xiriiriyeyaasha iyo waxyaabo kaloo badan.
IOS 8 waafaqid:
Ogeysiisyada isdhaxgalka ah: wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhakhso leh oo toos ah ula falgasho ogeysiiskaaga.
Kordhinta si loo wadaago: La wadaag waxyaabaha si dhakhso ah oo fudud si toos ah barnaamijyada kale adoo adeegsanaya Viber.
Naqshadeynta isbeddelada iyo hagaajinta si loo bixiyo khibrad isticmaale dhakhso leh oo dareen badan.
Degganaanshaha iyo hagaajinta waxqabadka iyo hagaajinta cayayaanka.
U soo dejiso Viber ee iPhone
Haddii aadan haysan arjigaan fariimaha ah ee kujira iPhone-kaaga, waxaad ku rakibi kartaa khadka tooska ah ee download-ka, oo laga heli karo App Store, kaas oo aad ka heli doontid hoosta.
Viber wuxuu ku jiraa App Store, wuxuu ubaahanyahay macruufka 6.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soosocda: Isbaanish, Jarmal, Bokm Norwegianl, Norwey, Catalan, Czech, Shiinees fudud, Shiinaha, Dhaqanka, Kuuriya, Croatian, Deenishka, Slovak, Finish, Faransiis, Griig, Cibraan, Hangari, Indooniis, Ingriis, Talyaani, Jabbaan, Malays, Holand, Booliis, Boortaqiis, Roomaani, Ruush, Iswidish, Thai, Turkish, Yukreeniyaan, Fiyatnaamiis, Carabi.